Hitachi ZX690LCR-7 & Extreme Machine - IKomatu's Sumo Dozer | ACE IMISHINI
I-Hitachi ZX690LCR-7 & Extreme Machine - iSumo Dozer yaseKomatu
Ukuthi ngokwenziwa kwesikambi nomshini wokwakha, kunemikhiqizo eminingi ngokwengeziwe evumelana nesimo esehlukile eyenziwe, futhi nazi izindaba zakamuva ngomshini ezivela kwa-Earthmovers
I-Hard Hitter - Hitachi ZX690LCR-7
U-Eoghan Daly uvakashela okukholakala ukuthi kungu-Dash 7 version wokuqala we-Hitachi Construction's 690LCR excavator ukuyosebenza eYurophu, esebenza eLive Work Grow eCentral Park eDublin.
Umshini okhanyayo we-orange uphethwe yiShannon Valley Group futhi unikwe amandla yi-Stage 5 injini ehambisana nokukhishwa kukhiqiza i-348kW kanye ne-torque engu-2,050Nm ku-1,300rpm. Ikala amathani angama-71.7 ekuvunjulweni ngobuningi, i-690LCR ikhombise ukusebenza kwayo ekuqhekezeni i-granite eqinile ne-Rammer C130 yayo ne-Epiroc hydraulic hammer okunamathiselwe.
U-Veteran opharetha uTom Reilly utshele u-Eoghan, “AmaHitaki abelokhu eyimishini yabaqhubi bangempela futhi le Dash entsha engu-7 ingcono kakhulu. Njengenjwayelo, inesakhiwo esihle sokulawula futhi ibushelelezi kakhulu kwizigaxa nayo. ”
Funda kabanzi mayelana nokusebenza kweHitachi ZX690LCR-7 nokusebenza kukaShannon eDublin ku-Earthmovers Magazine.
Extreme Machine - Sumo Dozer waseKomatu
Kumagazini kaNovemba 2020 we-EARTHMOVERS MAGAZINI (wethulwe ngo-Okthoba 2), uDavid Wylie ubuyekeza inguqulo yakamuva ye-Komatsu Europe yamathani angu-112 D475A-8, idokodo elikhulu kunawo wonke emhlabeni, elisebenza enkwalini yeNarva e-Estonia.
Ukufika lapho, lo mshini othile wasuswa embonini yaseKomatsu yase-Osaka wayiswa echwebeni laseZeebrugge eBelgium. Izakhi lezo bese ziqhutshwa u-2,300km ngamaloli ziyiswa kumthengisi waseBaltem As eKomatsu e-Estonia, lapho bezihlangene khona ngokugcwele endaweni yokusebenzela eyayisesizeni.
Uhlobo lweDash 8 le-D475A inikwa amandla yinsimbi yeSigaba 5 ekhiqiza u-934hp emagiyeni okuya phambili naku-1,040hp emuva. Ngomshini wayo wokuthambeka okabili we-U ne-ripper enkulu, inguqulo eboniswe lapha inesisindo samathani ayi-115!
Isikhathi Iposi: Oct-30-2020